पोउवा संघ अध्यक्षमा अधिकारीको उम्मेदवारी घोषणा, उनको प्रतिस्पर्धी कोइराला कि प्रजू ? – Arthik Awaj
पोउवा संघ अध्यक्षमा अधिकारीको उम्मेदवारी घोषणा, उनको प्रतिस्पर्धी कोइराला कि प्रजू ?
By आर्थिक आवाज २०७५ भाद्र ३ गते आईतवार १०:५२ मा प्रकाशित
पोखरा, ३ भदौ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सबैभन्दा चासोका साथ हेरिएको अध्यक्ष पदमा संघका बर्तमान महासचिव दामु अधिकारीले उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार दामु अधिकारीलाई अत्याधिक मतले विजयी गराऔं,’ यस्तो फेसबुक पोस्ट लेख्दै उनले आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेका हुन् । संघको महाधिवेशन आगामी असोज ५ र ६ गते हुँदैछ ।
शुभजगदम्बा अटोमोबाइल्स, शुभ जगदम्बा टुर्स एण्ड ट्राभल्स पोखरा प्रालि, शुभ जगदम्बा टायर एण्ड ट्रेड प्रालि, पोखरेली ए टु जेड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक अधिकारीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सार्वजनिक गरिसकेपछि उनको प्रत्यासी को आउँछन् भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।
संघका पूर्व महासचिव नारायण कोइराला र बर्तमान वाणिज्य उपाध्यक्ष विन्दुु कोइराला सुवेदी अध्यक्षको आकांक्षी रहेपनि उनीहरु दुवैको विकल्पमा बर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र बहादुर प्रजूलाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने तयारी भित्रभित्रै भइरहेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३ को वडा अध्यक्ष भएर जनप्रतिनिधिको भूमिकामा समेत रहेकाले अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने वा नबन्ने भनेर प्रजूले अझै पनि सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । अधिकारी नेकपा निकट व्यवसायी भएकाले उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने काँग्रेस निकट व्यवसायीहरुबाट बलियो उम्मेदवार खोज्ने प्रयास भइरहेको स्रोतले बतायो ।
अधिकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार प्रजू नै हुनसक्ने काँग्रेसले आँकलन गरेको छ । प्रजूलाई अध्यक्षमा अगाडि सारेर अन्य आकांक्षी नारायण कोइराला र विन्दु कोइरालालाई अन्य पदमा मिलाउन पहल समेत भइरहेको छ । अध्यक्षमा आकांक्षी कोइरालाद्वयबाट यस विषयमा सार्वजनिक धारणा केही आइसकेको छैन ।
महासचिवमा काँग्रेस निकट प्यानलबाट अर्जुन पोखरेल र नेकपा निकट प्यानलबाट किसान सुनारबीच प्रतिस्पर्धा हुने पक्कापक्की छ ।
पदीय समीकरण मिलाउँदा अन्य आकांक्षीहरु कुन पदमा उठ्छन् अझै टुङगो लाग्न सकेको छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पवन प्रजापतीले उम्मेदवारी दिने सार्वजनिक गरिसकेपनि प्रजू अध्यक्षको उम्मेदवार बने भने पद मिलाउन उनलाई वाणिज्य उपाध्यक्षमा झार्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । उद्योग उपाध्यक्षमा गोकर्ण कार्की र वसन्त राज गौतमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उपमहासचिवका आकांक्षी ४÷५ जना भएपनि प्यानलमा कोको अटाउँछन् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।